09/05/2018 admintriatra 0
Tranga telo miaro datim-pifidianana telo no soso-kevitra naroson’ ny birao mahaleo tena misahana ny fifidianana omaly, anisan’izany ohatra ny mahakasika ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan’ ny fotoana, izay ny datin’ny alarobia 29 ny volana …Tohiny
Hetsika etsy amin’ny 13 mai : Tsy mahafehy ny olony intsony Ravalomanana
Tsy misy mihaino ny toromarika avy amin-dRavalomanana Marc intsony ny mpomba azy amin’izao fotoana izao. Izany hoe tsy to teny amin’ireo mpikatroka ao amin’ny antoko Tim intsony ity filoha nasionaly ity. Hatramin’ny androany mantsy dia …Tohiny
Tovolahy iray 26 taona no maty tsy tra-drano, rehefa nofaohan’ny fiara taksibe Sprinter teny Bypass akaikin’ny tranombarotra Gastronomie Pizza omaly tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro. Ny faritry ny lohan’ity niharan-doza ity no voadona mafy, …Tohiny
Lozam-pifamoivoizana tany Ankazobe : Olona roa maty tsy tra-drano
Mpamily sy vehivavy iray no namoy ny ainy teo noho eo vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany Ankazobe, 100 kilometatra tsy hahatongavana aty Antananarivo, omaly tokony ho tamin’ny 05 ora maraina. Araka ny voalazan’ny teo anivon’ny …Tohiny